अमर आवासिय मा.वि. अमरापुरीले सोमबार, भब्य समारोह विच २९औं वार्षिकोत्सब मनाउँदैं – Saurahaonline.com
अमर आवासिय मा.वि. अमरापुरीले सोमबार, भब्य समारोह विच २९औं वार्षिकोत्सब मनाउँदैं
गैँडाकोट, १३ माघ ।
अमर आवासिय उच्च मा.वि गैँडाकोट–१५, अमरापुरीले सोमबार आफ्नो २९औं वार्षिकोत्सब मनाउने भएको छ । विधालयले भव्य समारोहका विच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित आफ्नो २९ औं वार्षिकोत्सब समारोह मनाउन लागेको विधालयका प्रधानाध्यापक एबं प्राचार्य रामचन्द्र देबकोटाले जानकारी दिनुभएको छ । समारोहमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विधालयका विभिन्न कार्यक्रमका उत्कृष्ट विधार्थीलाई सम्मान तथा पुरस्कार समेत वितरण गरिने जनाईएको छ ।
यसैबिच वार्षिकोत्सबको अबसर पारेर विधालयले गत शुक्रबार देखि विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमको संचालन गरिरहेको छ । यसैक्रममा विधार्थी र अभिभावक विच विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम अगाडी बढिरहेको विधालयका अतिरिक्त कृयाकलाप प्रमुख शिव सुबेदिले जानकारी दिनुभएको छ । विधार्थीहरुको अतिरिक्त विकासका लागी वार्षिक कार्यक्रम अन्र्तरगत यस वर्ष समेत खेलकुद कार्यक्रम लाई निरन्तरता दिईएको विधालयका अग्रज शिक्षक श्याम सुन्दर लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ ।
सोहि क्रममा आउँदो आईतबार दिउँसो विधालयका भु.पु विधार्थी विच भलिबल प्रतियोगिता र अन्य खेलकुद कार्यक्रमको जारी गर्न लागिएको विधालयको भु.पु विधार्थी मञ्चका सचिव राजन खरेल (पुर्ण ) ले जानकारी दिनुभएको छ । सोहि दिन भुपु विधार्थी विच मित्र–मिलन कार्यक्रमको समेत आयोजना हुने बताईएको छ ।